आइमाइको स्वाद .... - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » आइमाइको स्वाद ….
आइमाइको स्वाद ….
दश वर्षअघि काठमाडौं अहिले जस्तो व्यस्त थिएन। माइक्रोबस त आएकै थिएन, ट्रली बसहरु चल्थे, साझा बसले सेवा दिइरहेको थियो। दिउँसो सीमित ठाउँहरुमा पुग्ने गरी विक्रम टेम्पो चल्थ्यो, डल्ले पेट्रोल टेम्पो पनि थियो– मध्यम आय हुनेहरुको ट्याक्सी। मिटरमा चल्थ्यो। राति साढे आठ बजेपछि बस, टेम्पोहरु चल्दैन थिए। रात्रि जीवन त थियो, तर धनीमानीको मात्र। ट्याक्सी स्ट्यान्डमा थोरैमात्र ट्याक्सी हुन्थे। ९ बजेपछि ती पनि ग्यारेजमा जान हतार गर्थे।
अजय, पढाईसँगै रोजगारीका लागि काठमाडौं आएको ३ वर्ष बितिसकेको थियो। पश्चिम नेपालमा माओवादीको जगजगी थियो तर देशको राजधानी भएकाले काठमाडौं सुरक्षित नै थियो। ऊ न्यूरोडको एक कलरल्याबमा दिउँसो एकाउन्टेन्टको काम गर्थ्यो भने बिहान मीनभवन क्याम्पसमा पढ्थ्यो।
मंसिर महिना लागिसकेको थियो। काठमाडौंमा असोजदेखि नै जाडो सुरु हुन्छ, मंसिरमा जाडो बढ्न थालिसकेको हुन्छ। अझ त्यो दिन किन हो कुन्नी दिउँसैदेखि सिमसिमे झरी परिरहेको थियो।
“आज त मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ यार” सँगै काम गर्ने साथी मदनकृष्णले भन्यो।
“पख न साँझमा सरसँग अलिकति खर्च मागुमला नि” उसले जवाफ फर्कायो।
बिहेको मौसममा कलर ल्याबहरुलाई भ्याइ नभ्याई हुन्छ। मोहनकृष्ण फोटोग्राफर पनि हो, ऊ ल्याबको काम पनि गर्छ। साहू दिलदार छन्, उनले यसैपालि नयाँ मेसिन जोडेका छन्। विराटनगरतिरका स्टुडियोले पनि त्यहीँ ल्याउँछन्, अजयको नाताले फोटो धुलाउने काम। आजैमात्र पूर्वका स्टुडियोको २५ हजार रुपैयाँको काम आएछ, काठमाडौंभित्रको काम त जम्मा ७ हजारको भएछ। यो सिजनमा पूर्वबाट मात्र एक लाखको काम आएको उसले हिसाब निकाल्यो।
“कसैगरी विराटनगरमा ल्याब खोल्न पा त मालामाल हुने रहेछ” अजयले सोच्यो। ल्याबको हिसाबकिताब उसले हेर्ने भएकाले उसलाई थाह थियो, नयाँ ल्याब खोल्न कम्तिमा १० लाख चाहिन्छ , त्यति उसको हैसियत थिएन, हुन्थ्यो भने ३५०० तलबका लागि उसले कसैकहाँ जागिर खान आवश्यकता थिएन। ३५०० तलबमा ९०० कोठा भाडामा जान्थ्यो, १५०० खाइखुराकमा, ७०० रुपैयाँ गाडी भाडामा छुट्याइएको थियो, बाँकी पढाई खर्च। कहिले पुग्थ्यो, कहिले पुग्दैन थियो। गाउँमा साना भाइबहिनीको पढाईका लागि पनि उसले यहीँबाट खर्च खेप्नु पर्थ्यो। झोराहाटको पुस्तैनी जग्गाले मुश्किलले पुग्थ्यो।
त्यसपछि ऊ हरेक रात उठेर दिदीका आकर्षक फाँचा, तिघ्रा र तिघ्राका कापा हेर्ने गर्थ्यो अनि ट्वाइलेटमा गएर छोल्ने गर्थ्यो। बसपार्कमा पाइने घासलेट साहित्य किनेर पढ्न थाल्यो। मस्तरामका किताबहरु ल्याएर सुटुक्क सिरानीमुनि राखेर पढ्ने उसको बानी भइसकेको थियो। उसकी बहिनी उषाले पनि ती किताबहरु पढ्न थालेकी रहिछ। उसलाई थाहै थिएन।
एकदिन दिउँसो आमा र दिदीबहिनी झोराहाट गएको र भाइ स्कूल गएको मौका पारेर अजय सचित्र अश्लिल किताब पढ्दै थियो। उषाआइपुगी। “के पढेको दाइ?” एकाग्र भएर आफ्नो माल सुम्सुम्याउँदै पढिरहेको अजय झसंग भयो। हत न पत सिरानेमुनि हाल्ने प्रयास गर्दै अतालिदै उसले “केही होइन, केही होइन ” भन्यो। “तैलै के पढ्छ्स मलाई सब थाह छ, पख दिदीलाई भन्दिन्छु” भन्दै उषाले सिरानी पल्टाएर किताब झिकिहाली। दिदी कोपिलाको रिस कडा थियो, भाइबहिनीलाई कुटेर तह लगाएकी थिइ, भनौं उसले अनुशासनमा राखेकी थिई।
“उषा दिदीलाई नभन्दे, ला ५० रुपैयाँ दिन्छु” केही उपाय नलागेपछि अजयले आफ्नो पकेटबाट ५० रुपैयाँको नोट झिकेर दिदैं बहिनीलाई फकायो। त्यो समयमा ५० रुपैयाँ ठूलै रकम थियो। उषा मख्ख परी। “ ल भन्दिन ला” उसले किताब फर्काइ, “तर मलाई पनि पढ्न दे है ”। “धेत तँ पढ्छस् र? यो त फोहोरी किताब हो” उसले भन्यो। “अँ, मैले तेरो सिरानीमुनिबाट कतिपटक झिकेर पढिसकेको छु” उस्ले हाँस्दै भनी।
“फटाही” अजयले उषाको गाला चिमोट्दै भन्यो, “आइज, मेरो काखमा बस, दुबै जना सँगै पढुँला” उसले उषालाई तान्दै भन्यो।
ऊ सजिलैसँग आएर काखमा बसिदिई। उसले पहिलो पाना पल्टायो। ब्रा विक्रेता आएर सबिता भावीलाई ब्रा बेच्न खोज्दा सबिताले आफ्ना ठूल्ठूला फाँचा समातेर मोलेको दृष्यले उसको उत्तेजना बढयो, उषाको भर्खर उठेका दूधमा च्याप्प समाएर मोल्यो। पहिलो पटक कुनै केटीको दूधमा हात राखेको अजयका लागि यो यो स्वर्गिय आनन्द थियो। उसलाई यस्तो लागिरहेको थियो, मानौं नौनीको थुप्रोमा उसको हात परेको होस्। ती कलिला दूधमा जति हत्केला मोल्दै जान्थ्यो, उसलाई उतिनै मजा आइरहेको थियो। “ऐया दाइ, दुख्यो क्या” योभन्दा अगाडि अश्लिल किताब पढ्दा उत्तेजनामा आएर आफ्ना दूध आफैले सहल्याउँदै आएकी उषाले साँच्चीकै पीडा भएर भनी, किनभने अजय उसको दूध कठोरतापूर्वक मोलिरहेको थियो।
“नकरा जाँठी, दुख्छ? हेर्त त्यहाँ कति मजाले मोलिरहेको छ” उसले चित्र देखाउँदै भन्यो। “विस्तारो मोलन है, मेरो प्यारो दाइ” उषाले फकाउने स्वरमा भनी। ऊ किताबका पाना पल्टाउँदै थिई। हरेक पानामा सम्भोगका सचित्र वर्णनले उत्तेजित भएको अजयले पछाडिबाट आफ्नो सामान सीधा बनायो र उषालाई एक पटक जुरक्क उठाएर काखमा मिलाएर राख्यो।
आफ्नो चाकमुनि लठ्ठीजस्तो सामानको अनुभवले एक पटक त उषा झसंग भइ, “ के हो दाइ, पछाडि” उसले फर्कने प्रयास गरी। अश्लिल हिन्दी किताबमा सम्भोगका वर्णन पढे पनि केटाहरुको सामानबारे उसलाई पूरा ज्ञान नै थिएन। पहिलोपटक आफ्नो चाकमुनि दबिएको लाँडो उसका लागि नौलो अनुभव थियो।
“केही होइन, मेरो हात, तँ पढ्न किताब” अजयले मुनिबाट बिस्तारै बिस्तारै दल्दै भन्यो। एक छिनपछि ऊ स्खलित भयो
“आज त पूरा मजा आयो, मेरी प्यारी उषा” उसले उषाको गालामा प्वाक्क म्वाई खायो। “अर्को दिन पनि गर्न दे ल, म तलाई पैसा दिन्छु नि, जा अहिले” उषालाई पठाएर आफ्नो लाँडो सफा गर्ने उद्देश्यले उसले भन्यो। ५० रुपैयाँ पाएकी उषा पनि फुरुंग हुँदै फिल्म हेर्न गई।
त्यो दिन उषाको चाकमा दलेर चित्त बुझाएको अजय, फेरि उषालाई एक्लै पारेर राम्रोसँग सुताउने दाउमा लागिरह्यो, तर लामो समयसम्म त्यो संयोग जुरेन।
अहिले अजय मानलालको विश्वासपात्र भइसकेको छ, ऊ अहिले कलरल्याबको एकाउन्टेन्टमात्र नभएर बूढाको कारोबारको दाहिने हात पनि हो। अरुसँग फोटो धुलाएकोमा मोहरदामसमेत नछाड्ने बूढा दुई चार सयका लागि बूढाले अजयसँग कुनै हिसाब किताब खोज्दैनन। त्यही भएर उसले विश्वासका साथ बूढासँग भरै मागौंला भनेको थियो।
जसै साँझ पर्दै गयो, जाडो पनि बढ्दै गयो।। मोहनकृष्णले आँखा सन्कायो, अजयले मुख फोर्‍यो– “सर आज मौसम चिसोचिसो छ, यसो अलिकति खर्च पाउँन। यसो खाजा खानु पर्‍यो।” “ए हो त है, ल ल ठीक छ” बूढा पनि जोशिदै भने। मानलाल आफैले केटाहरुलाई चतामरी र मःम खुवाए। “कन्जुस बूढा के को पैसा चुहाउँथ्यो” मोहनकृष्ण फुस्फुसायो। अजय मुसुक्क हाँस्यो मात्र।
ल्याबको काम गर्दागर्दै राति नौ बज्यो। बाहिर निस्कँदा पानी सिमसिम परिरहेकै थियो। …कति चिसो मौसम’, उसले मनमनै सोच्यो। खल्तीमा हेर्‍यो, १०० रुपैयाँ रहेछ। क्वाटर ब्यागपाइपरलाई ६५ रुपैयाँ, चाउचाउ ९ रुपैयाँ, २ वटा अण्डा ६ रुपैयाँ आजलाई पुग्छ, उसले हिसाब निकाल्यो। ल्याबबाट बाहिर निस्किएको मात्र थियो, सटरको छेउमा ५०० को नोटमा राजा वीरेन्द्र मुस्कुराई रहेका थिए। उसले वरपर हेर्‍यो, न्यूरोड सुनसान भइसकेको थियो। …पसलकै पो हो कि’ उसले सोच्यो र नोट उठाएर साहूजीलाई दिन पाइला फर्कायो। …हैन दिनभरिमा १३००० को कारोबार भएको छ, सबैको बिल त चुस्त दुरुस्तै छ। पैसा मैले आफैले गनेर साहूजीलाई दिएको हो’ उसको एकाउन्टेन्ट दिमागले क्षणभरमा हिसाब निकाल्यो। …बेलुकाका लागि जोगाड’ आफैसँग मुस्कुराउँदै उसले पर्समा पैसा हाल्यो।
यतिखेर ट्रली पाइदैन, भक्तपुरको गाडी पाइन्छ कि, ऊ लाग्यो बागबजारतर्फ। तर बसपार्क खाली भइसकेको थियो। “थुक्क, आज पनि गाडी पाइएन, हिडेरै जानु पर्‍यो” ऊ सोच्दै रत्नपार्कतिर पाइला चाल्न थाल्यो। रत्नपार्कबाट पुतलीसडक हुँदै बानेश्वर जान नजिक पर्छ। बसपार्क पुगेकोमात्र के थियो, एउटी ३०–३५ कि अधवैंशे महिला रोइरहेकी थिइन।्
“के भयो दिदी” उसले नजिकै गएर साहानुभूति दर्शाउँदै भन्यो।
“हेर्नुन भाई, बसले यतिखेर ल्याएर छाडिदियो। भान्जाकोमा जानुपर्ने, अब कता हो कता कसरी जानु” ती महिलाले आँशु पुछ्दै भनिन।
“तपाईको भान्जा कहाँ बस्नु हुन्छ नि” अजयले सोध्यो।
“पिपलबोटमुनिको ढुंगेधारा नजिकैको कोठा छ” ती महिलाले भनिन।
“कताको पिपलबोट? काठमाडौंमा यस्ता ढुंगेधारा त कति छन् कति? तपाईको भान्जाको कोठा वरिपरिको कसैको फोन नम्बर छ?”
“पहिले आउँदा दिउँसै थियो, बसपारकबाटै हिडेर गा थिम्, दिउँसो भा त पत्ता लाउँथे” ती महिलाले भनिन।
“उसो भा, यसो गर्नु न त, यहाँ कुनै लजमा बस्नु बिहानै जानु, आउनु म लजसम्म पुर्‍याई दिन्छु” अजयले भन्यो।
“मसँग लजमा बस्ने पैसै छैन, बाबु” ती महिला फेरि रुन थालिन।
…के झन्झट आइलाग्यो, बेक्कार नसोधेको भए पनि हुने रैछ’ अजयले मनमनै सोच्यो …आफ्नो कोठामा लगेर पनि ठाउँ छैन।’ त्यतिन्जेलसम्म वरपर बसका ड्राइभरहरुको भीड लाग्न थालिसकेको थियो। उसको मनले ती महिलालाई बसपार्कमा एक्लै छाड्न मानेन।
“ल हिड्नुस् न मेरो कोठामा जाउँ, म बिहान पुर्‍याई दिउँला” जान त जाने कसरी पो जाने, अघि भेटेको ५०० छँदै थियो। उसले ट्याक्सीलाई ७५ रुपैयाँमा बानेश्वरका लागि फिक्स गर्‍यो, तर ट्याक्सी चोकबाट भित्र नजाने भयो। ल ठीकै छ, अलिकति हिँडौंला उसले सोच्यो। बानेश्वर चोकमा एउटा पसल लगभग रातभरि नै खुल्ला हुन्थ्यो। …अब यतिखेर गएर कहाँ भात पकाउनु, यो आइमाइलाई चाउचाउ पकाई दिन्छु, आफू टुच्च लगाएर सुत्छु’ उसले मनमनै सोच्यो। ट्याक्सीबाट उत्रिएर उसले दुई वटा चाउचाउ, ड्राई मिट र ब्यागपाइपर किन्यो। संयोगले पसलमा क्वाटर रहेनछ, साहूले उसलाई हाफ नै भिडायो। …अर्को दिनलाई पुग्छ’ उसले मनमनै सोच्यो।
ट्युबलाइट बिग्रेको धेरै दिन भएको थियो। १५ वाटको रातो बत्तीको भरमा उज्यालोले काम चलाई रहनु परिरहेकेा थियो।
“के गर्ने, घरभेटीलाई बत्ती फेरिदिनु भनेको धेरै दिन भयो” उसले कोठाको स्वीच अन गर्दै भन्यो।
एउटा कोठा, त्यहीँ किचेन, एउटै खाट। “हेर्नुस्, म कहाँ सुत्ने ठाउँको समस्या छ, के गर्ने होला?” उसले समस्या दर्शायो।
“भाइ, समस्या नमान्नुस, तपाई माथि सुत्नुस, म तल सुतुँला” ती महिलाले भनिन।
उसले चाउचाउ उमाली दियो। “तपाई माइन्ड नगर्नुस है। म त जाडो जाडो भएर आज यसो खाउँ भनेर लिएर आछु” उसले भन्यो।
“हैन हैन खानु खानु,” ती महिलाले भनिन।
ऊ ड्राईमिटसँग ब्यागपाइपर खान थाल्यो। कोठामा बिच्छ्याइएको चटाईमै ती महिलाका लागि ओच्छ्यानको व्यवस्था गरिदियो, उसले आफ्ना दुई वटा ओढ्नेमध्ये एउटा दियो।
…कस्ती लाज पचेकी आइमाइ रहिछ’ अजयले मनमनै सोच्यो।
“सुन्नुस त………….अँ के अरे, तपाईको नाम?” अजयले आफ्नो ढुकढुक गरिरहेको मुटुलाई दबाउँदै सोध्यो।
“हेर्नु मैले अहिलेसम्म ……………….आइमाइको स्वाद लिएको छैन,………………. जवर्जस्ती गर्दिन। एक चोटि …………..” उसले जानीजानी वाक्य अधुरै छाड्यो।
“हुन्छ, आउनु न त……” एक छिन सोचेर आइमाइले आमन्त्रण गरी।
“आहाहा……….क्या मज्जा यार………………..” पहिलो पटक छिराउँदा स्वर्गिय आनन्दको अनुभूति गरिरहेको थियो। एक पटक झिकेर फेरि पसायो।
कम्मरमुनिबाट आवाज आइरहेको थियो। उसको स्पीड बढ्न थाल्यो “ आहा….हा.. हा.. अँ.. अँ.. कमला..मेरो….आहा..हा.. लागि….. आहहहह.. कताबाट.. आयौं….तिम्रो पुती….आहहह….क्या मज्जा…”
ऊ मच्चीदै थियो। मुनिबाट कमलाले साथ दिनमात्र थालेकी थिई, उसको लाँडोले हिम्मत हारिगयो। एक मुठ्ठी बिर्य कमलाको पुतीले सोच्यो। ऊ निढाल भएर कमलाको गाला चुम्दै उहीमाथि ढल्यो।
…अजिंगरको आहारा दैवले पुर्‍याउँछ। मजाले चिक्न पाइने भयो’ अजयले मनमनै सोच्यो।
“पूरा एक्सपर्ट छौ जस्तो छ नि” अजयले कमलाका चोलोभित्र हात पसाएर दूध माड्दै भन्यो।
“कार्कीको तुरी चेप्न थालेको ८ वर्ष भइसक्यो, यति जाबो कुरा पनि जानेन भने जँड्याहा कार्कीले उहील्यै अर्की भित्र्याई सक्थ्यो” कमला आफू स्खलित भएकी थिइन।
“दूध त्यसरी माड्ने हो त लाटा मजाले आफ्नो पञ्जाले रगडी रगडी माड्नु पर्छ” चोलोका टाँकहरु खोलेर दूध अजयको मुखमा दल्दै कमलाले भनी। अजयका लागि चिकाईमा दक्ष हुने गज्जब मौका थियो। ऊ दुई हातले कमलाका पुष्ट दूध चलाउन थाल्यो। कमला उसको लाडोलाई पुनः सक्रिय बनाउन लागि परेकी थिई। उसको पूतीबाट पानी बग्न थालेको थियो। अजयले दूधका मुन्टा आफ्ना मुखमा हालेर चुस्न थाल्यो।
“ओहो….हो मेरी दुई वर्षकी छोरीभन्दा पनि कति छिटो गरी चुसेको….त्यसरी त दूध मुखभरी आइहाल्छ नि। विस्तारै जीब्रोले दूधका मुन्टा खेलाउँदै हल्का गरी चुस्नु पर्छ” उत्तेजित हुँदै गएकी कमलाले सिकाई। नभन्दै अजयको मुखभरी दूध आइसकेको थियो, त्यसपछि उसले करिब पाँच मिनेटसम्म पालैसँग दूध चुस्यो। अब उसको लाडो फेरि प्वालभित्र पस्न तयार भइसकेको थियो।
“ल अब विस्तारो हतार नगरीकन मेरो पूतीको छेउमा लाडोको सुपाडी राखेर विस्तारै विस्तारै ठेल्नुस” कमलाले आफूमाथि चढिसकेको अजयको ओठमा आफ्नो ओठ जोड्दै सिकाई।
अजयले त्यसैगरी पूतीको गिद्रोमा केहीबेरसम्म आफ्नो लाडोको सुपाडी दल्यो। उसको लाडो झनझन कडा हुँदै थियो। उसको पालो ग्वाल्म हाल्यो।
“ल फेरि हतार गरेको, मेरो पूती भागी त हाल्दैन थियो नि” पूर्ण उत्तेजनामा आएकी कमलाले अजयको ओठ टोकिदिई, “ल अब केही बेरसम्म विस्तारो विस्तारो भित्र बाहिर पार्नु”
“आहहहहहहह…….हस….मेरी……रानी…जो आदेश….मर भने पनि मरिदिन्छु….आहहहहहह….कति मज्जा…..आ.हाहहहहहहहहह” अजयले टोकाइको जवाफ टोकाईले नै फर्काउँदै भन्यो।
आइमाईले आफ्नो पूतीबाट प्रशस्तै पानी बगाएकीले आवाज फरक आउन थालेको थियो . “सी…सी…..उह….आह….आह……सी…..सी…अँ…हँ…..हँ….उह…..गर्नु….गर्नु…आह…आह….सी…..अँ….हँ… गर्नु न…गर्नु… उह….आह….आह……सी…..सी…अँ…हँ…..हँ….उह … मच्चीनु न अझै… उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह ” आइमाईले अजयको कम्मर दह्रोसँग चेपेकी थिई। अजय पनि आफ्नो न्वारानदेखिको बल लगाएर मच्चीदै थियो।
“क्या मज्जा…… आह… रानी….आह…ओ…..हा…..हा.. जति दिन बस्छौ बस…मलाई यस्तै मजा देउ….जानेबेलामा तिमीलाई खर्चबर्च दिउँला…आह…हा रानी..थाप….अझै चेप…मेरो लाँडो तिमीभित्रै राख…”
“स्वाँ…..स्वाँ……. आ………..ह………अँम… स्वाँ…स्वाँ….आहहह” लामो सास छाडेर उसले अजयको कम्मर छाडिदिई। ऊ चरम सन्तुष्टीकोे चरणमा पुगेकी थिई।
“के भो…….रानी……आहह……के ….थाक्यौ….आ..आ…आ..उ…..उ…” अजयको सामानले पनि मजाले मस्तसँग बिर्यको पिच्का छाड्यो।
बिहान चार बजेतिर निन्द्रा खुल्दा दुबै जन्मजात नाङ्गो अवस्थामा थिए। कमलाका पुष्ट सेता तिघ्राहरु त्यो मन्द उज्यालोमा सिंगमरमरको खम्भाजस्ता आकर्षक देखिएका थिए। मस्त निदाएकी कमलाका दूध उसको साससँगै तलमाथि हल्लिरहेका थिए। अजय उठेर आइमाईका पुतीका फाँकाहरु पल्टाउन थाल्यो। …क्या गज्जबको प्वाल यार’ उसले आफ्ना औंलाहरु पसायो, राती उसैको बिर्यले निथु्रक्क भएका प्वालको भित्ता ल्यासल्यास चिल्लो थियो। उसको सामान फेरि उठ्यो। आइमाई मस्त निद्रामै थिई। अजयले आफ्नो सामान फेरि पसायो र करिब दश मिनेटसम्म प्वालको पुरा आनन्द उठायो।
यतिबेला भने उसले नयाँ प्रयोग गर्‍यो। सँगसँगै दूध पनि चुस्ने चलाउने अनि तलबाट माललाई भित्रबाहिर गर्ने गर्‍यो। “फ्यात…फ्यात…फ्यात” उसको लाँडोले तेस्रो पटक बिर्यको पिच्कारी छाड्यो।
बिहान उठेर बाथरुममा नुहाई धुवाई गरेर निस्कियो। उसलाई उसले कमलालाई चामल तरकारी मरमसाला कहाँ राखेको छ भन्ने देखायो। रातभरि उसको बिर्य र आइमाईको झोलले फोहर भएको तन्ना धुई दिई। घरभेटीलाई उसले आफ्नो मावली गाउँकी दिदी भनेर चिनाएको थियो। कमला उसको लुगा धुने, कपाडा सफा गर्नेलगायतका काम गर्न थाली, अनि राति उसलाई पूरा आनन्द दिन्थी। अजय हरेक दिन कमलालाई चिक्थ्यो, कहिले काँही त दुईदेखि तीन चोटीसम्म चिक्थ्यो कहिलेकाँही मूड बन्दा ऊ दिउँसै पनि अफिसबाट बाहाना बनाएर आएर कमलाको प्वालको पूरा आनन्द लिन्थ्यो। कहिले उभ्याएर, कहिले कोल्ट्याएर, कहिले कुकुरको पोजिसनमा …उसले फरक फरक पोजिसनमा कमलालाई चिक्यो।
“सुन्नुत्…. मेरो नछुने रोकिएजस्तो छ” १५ दिनपछि एक रात जब अजयले कमलालाई नंग्याएर चिक्न सुरु गर्न लागेको थियो, त्यतिखेरै कमलाले भनी।
“के भएर त…” आइमाईको नछुने रोकिने कारणबारे त्यति जानकारी नभएको अजयले दूध माड्दै सोध्यो।
सित्तैमा आइमाई चिक्नको मजा पाइरहेको अजय झसंग भयो। … ला खत्तम भयो, कहाँ यस्ती खल्बाट आइमाईलाई जिम्मा लिनु। यसलाई कसरी पन्छाउने यार’ उसले मनमनै सोच्दैमात्र थियो ……
“ओहो…..मेरी रानी… तिमी कति मायालू छौ…..ल आज अन्तिम पटक मजा गरौं…” अजयले आइमाईलाई ओच्छ्यानमा लडाउँदै भन्यो।
“आज म तपाईंलाई अर्को मजा दिन्छु……..मलाई अलि गाह्रो हुन्छ….तैपनि तपाई मजा लिनु…….” कमलाले भनी।
“कस्तो मजा….” उताउलो भएको अजयले सोध्यो।
“आज मेरो दुई नम्बरमा गर्नु….लोग्नेमान्छेलाई त्यहाँ धेरै मजा आउँछ रे। एकचोटी कार्कीले गरेकेा थियो…..” उसले घोप्टी परेर चाकलाई पोजिसनमा तयार पारेर भनी।
अजयले आफ्नो लाँडो कन्डोको प्वालमा छिराउने प्रयास गर्‍यो “ ऐया….या..यययययय, छिरेन? यसो गर्नु अलिकति तेल तपाईको तुरीमा लगाउनु अनि मेरो प्वालमा पनि दलेर छिराउनु न……” कमलाले उपाय सुझाई। अजयले त्यसै गर्‍यो। अहिलेसम्म दुई वटा छोराछोरी झरेर खुकुलो भइसकेको प्वालबाट मात्र आनन्द उठाई रहेकेा अजयले टाइट प्वालमा आफ्नो लाँडो छिराउँदा अर्कै विशेष आनन्द अनुभूति गर्‍यो। कन्डोको टाइट प्वालमा करिब दश मिनेट लाँडोको घर्षण गराईसकेपछि उसलाई के सनक चढ्यो कुन्नी बिर्य झर्ने बेलामा आइमाईलाई उत्तानो पार्‍यो र मुखैमा बिर्य झारिदियो। कमला मजाले हाँसी, “यसो गर्न पनि जानिसक्नु भयो है…..अब मेरी सौतेनी बहिनीले पुरा मजा पाउने भई ….” मुखमा झरेको बिर्यलाई निल्ने प्रयास गर्दै उसले भनी। त्यो रात पनि अजयले कमलालाई दुई चोटी चिक्यो। भोलिपल्ट उसले सहकारीबाट ३००० रुपैयाँ झिक्यो र कमलालाई “लेउ यो बाटो खर्च” भनेर हातमा हालिदियो। बसपार्कमा गएर कमलालाई सिन्धुलीको गाडी चढाई सकेपछि विदाई गर्दै उसको मुखबाट निस्कियो…
“ल है कमला यो शहरको आफन्तलाई नबिर्सनु…..कहिले काँही आउँदै गर्नु……….”
“आई हाल्छु नि…..अर्को पल्ट आउँदा तपाईको कोशेली लिएरै आउँछु……”
“कन्डम किन है दाई……” उषाले विस्तारै आग्रह गरी। “ल….” बाटोमा उषा र दीपा अलि अगाडि गईसकेपछि औषधि पसलका उसले एक प्याकेट कन्डम किन्यो। …आज दुइटीको स्वाद लिने भइयो’ उसले मनमनै सोच्यो।
अर्को कोठामा पुग्ने बित्तिकै अजयले उषालाई च्याप्प समाएर ओठमा ओठ जोडिहाल्यो। “पख न दीपा सुतेकै छैन क्या, एक छिनपछि आउँछु” उषाले आफूलाई फुत्काउँदै भनी। “तेरी दीपाले दिन्न? तलाई र त्यसलाई सँगै भ्याउनु पर्‍यो” अजयले भन्यो। “भाग्, पहिले मलाई नगरीकन तलाई किन अरुलाई गर्न दिन्छु र……आज मलाई गर.. म भोलि फकाउँछु” त्यसो भन्दै उषा दीपाको कोठातिर लागी। करिब करिब घण्टापछि ऊ समीज र पेन्टीमात्र लगाएर आई। उसको गुलाबी पेन्टी भिजेको थियो।
“क्या हो, उषा तँ त खग्गु भइछस्, खुब केटाहरु खेलाउँछस् कि क्या हो…?” अजयले उसको समिज शरीरबाट अगल गर्दै सोध्यो।
“ए त्यसो भए लेस्बियन भइस्……” अजय उषाको दूध खेलाउनमा मस्त थियो। “पूरै त होइन, यसो मजा त लिनु पर्‍यो नि…..” अजयको लाँडोको सुपाडीले जिब्रोले खेलाउँदै उसले भनी। अजयलाई पूरा उत्तेजना आउन थाल्यो। “दाई तेरो सामान त क्या गज्जबको रैछ। कत्रो हो…..केटीहरुलाई त यसबाट पुरा मज्जा आउँछ। हामी त भान्टासान्टा हाल्छौं…..” ललिपप जसरी अजयको लाँडो मुखमा खेलाउँदै उसले भनी।
“……..सी………….सी…….स्वाँ…………स्वाँ……………आह………..आह…………गर दाई अब गर। मलाई अति भयो………आह…………सी…………..सी………….स्वाँ…………स्वाँ” उषाको मुखबाट आवाज आउन थाल्यो। अजयले कन्डम लगाएर उषाको पूतीको फाँकोमा केही बेर लाँडो रगडेर विस्तारै धक्का मार्‍यो। “…………उफ………..ऐइया………” उषाले एकैपटकमा झट्का मारेर अजयको कमरलाई ठेल्दिई। स्वाट्ट छिरेको लाँडो बाहिरियो। “हे जाँठी के गरेकी, छिराउनै दिइन, नछिराई त कहाँ मजा आउँछ” अजयले झर्केर फेरि उषाको पूतीमा लाँडो छिराउनका लागि लाँडोमा हात पुर्‍यायो। कन्डम वरिपरि रगत नै रगत….…वाह भर्जिन नै रैछे नि’ ….मनमनै सोच्दै उसले फेरि पसायो। पूतीबाट हलुका रगत बगिरहेको थियो।
“हैन क्या दुख्यो क्या, भान्टा हाल्दा यसरी दुख्दैन थियो” उषाले भनी। “ ल म विस्तारै गर्छु नि त….” अजयले धक्का दिन सुरु गर्‍यो।
“उषा…..मेरी प्यारी….काली….पोकली….तेरो पूती त क्या टाइट……आह….हाहहहहह…..क्या मज्जा आयो….तलबाट तँ पनि साथ दे न….”
“हस………….मेरो अजु……..ऐइया….ऐइया………आ……………आ………आ…………..आ………..” उषा पनि तलबाट आफ्नो पूती दुखेको पीडा भुलेर साथ दिन थाली। ऊ सक्दो टङ किस गरीरहेकी थिई। जसले गर्दा उसको पीडा कम भइरहेको थियो।
दीपा ओच्छानमा मडारिदै थिई। “क्या हो, धेरै बेर लगाइस् नि एक घण्टै भयो नि” दीपाले उषालाई भनी। “ के गर्नु दाईले छाड्दै छाडेन, मजा गरेर आको नि” उषाले भनी। “ अबुई, आफ्नै दाई बहिनी पनि तिमीहरुले गरेका” आश्चर्यचकित हुँदै दीपाले भनी। “के हुन्छ त….जोसँग गरे पनि केटाहरुको चिज त्यही हो, कन्डम लगाएपछि सुरक्षा भइगयो” उसले दीपाका दूध माडी। दीपा र उषा एकअर्कासँग रातभरि खेल्थे, नांगै। दीपा उषाका दूध चुस्थी, उषा दीपाका। एक अर्काका पूतीमा औंला छिराएर मैथुन गराउँथे। दुबै नांगिएर एकअर्काको मुखमा मुख जोडेर टंग किस गर्न थाले। दुबैका हात एक अर्काका मस्त दूध माड्नमा सक्रिय हुन थाले।
“क्या हो दीपा, एकछिन अगाडिसम्म उषालाई तेरो भाउजू बन्छु भन्ने अनि भाउजू बनाउन खोज्दा के को लाज” आफ्ना बलिष्ठ बाहुपासमा दीपालाई कस्दै उसले भन्यो। उषा पनि छेउमा नांगै थिई। “हो त नि.. नक्कल पार्छे…….यसलाई त तेरो चिज आफ्नोमा कतिखेर छिराउँ भइसक्या छ” दीपाका चाकमा प्याट्ट हान्दै उसले भनी। “आज त तिमीहरु दुइटीले मेरो सामान खियाउने भयौ” अजयले दीपालाई सुतायो, “उषा मिठी कि दीपा है” दीपाका ओठमा ओठ जोड्यो। दीपाले पनि साथ दिई।
अजयले दीपाको पूतीमा आफ्नो लाँडो छिराउन खोज्यो, तर त्यति सहज रुपमा गएन। उसले मजाले धक्का मार्‍यो। १७ वर्षकी मस्तकी तरुनीको पूतीको मूलद्वारको भित्ता दर्फर्‍याउँदै लाँडो भित्र पस्यो। “दीपा, मेरी रानी………क्या हो…तिम्रो त सिल खुलिसकेको रैछ नि….” धमाधम धक्का मार्दै अजयले भन्यो। “त्यही त अघि मेरो त रगत आको थियो” अजयलाई चिक्नका लागि सहयोग पुर्‍याई रहेकी उषाले अजयको गेडा खेलाउँदै भनी। ऊ घरी अजयको चाक सुम्सुम्याई रहेकी थिई, घरी गेडालाई सहल्याई रहेकी थिई।
अजय धमाधम धक्का मारिरहेको थियो। “ ल ठीक छ मेरी रानी……. ल ठीक छ……..तिमी नै मेरी हौ…………आहह…………..आहाहा……..आज म तिमीलाई पूरा आइमाई बनाउँछु………….आहाहाहा…………..”
क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच…क्वाँच….क्वाँच… खल्यात…खल्यात… खल्यात…. खल्यात…..क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच….क्वाँच…क्वाँच….क्वाँच…
करिब आधा घण्टाको अभ्यासपछि अजयको लाँडोले बिर्य ओकल्यो फच्याक्क….फच्च..फच्च।
aunty story, brother and sister, erotic stories, inscent story, nepali sex stories, sex stories
दाजु संगै भाउजु चिकेको
Youn guru meri bhauju Bhauju